Adeegsiga caqliga iyo akhriska xorta ah – Kaasho Maanka
Sida dadka badankiisu aaminsan yahay noolaha oo dhan waxaa ugu sharfan dadka. Dadku waa karaamaysan yahay, asaga ayaana ugu mudan wixii nafi ku jirto. Noolaha oo dhani waa ka siman yihiin wax walba. Nafta, daremayaasha, korriinka, taranka, iyo kuwa kaleba. Waxa kaliya ee inaga soocay waxaas oo makhluuq ahi waa garaadka (intelligence). Taas oo noolayaasha kale aynu dheernahay ama aysan lahaynba.
Caqli waa eray asal ahaan kasoo jeeda afka carbeed, afkeenana ku noqonaya garaad. Garaadku waa asalka tiirka noloshu ku taagan tahay. Qolo walba hormarkeeda iyo waxsoosaarkeedu wuxuu le’egyahay hadba inta caqligooda ama garaadkooda ay ka shaqaysiiyaan.
Hadaba caqligaas aan ka soo sheekaynay waxaa loogu talagalay in wax walba oo nolosheena ah aan u adeegsano sida diin, dhaqan, dowlad, dhaqaale, siyaasad, iyo dhamaan laamaha noloshaba. Wax walba.
Diimaha guud ahaan, gaar ahaana Islaamka, oon ognahay halka ay nolosha ugu jiraan, waxay sheegtaan inay caqli iyo cilmi ku dhisan yihiin, hadana ma ogola adeegsiga caqliga iyo akhriska xorta ah!
Waxaad maqlaysaa ama arkaysaa nusuus sheegaysa in su’aalaha, shakiga iyo wax iswaydiinta badan qowm dhan noloshooda galaafteen ama loo halaagay! Waxaa laguu sheegayaa in wax iswaydiinta iyo su’aalaha badani fitno yihiin ama lagu gaaloobayo!
Waxaan ku waydiinayaa akhristoow immisa buug, shiikh ama firqo ayaa lagaaga digay inaad akhridid, dhagaysatid ama meel ay joogaan tagtid? Ma is waydiisay sababta? Maxay tahay buuggaas ama kitaabkaas haddaad akhridid aad u gaaloobaysid? Ma xaqqa ayay tahay inuu baadilka ka baqo mise xaqqa ayaa daciif ah oo looga cabsanayaa inuu si fudud ku buro? Muxuu ahaa xaqqaan haddii su’aal laga keenaba buraya!?
QORMO LA XIRIIRTA: Wahaabiyada iyo aqoonta casriga ah
Xaqiiqdii marnaba adeegsiga iyo ka shaqaysiinta caqligu kama hor imaanayaan xaqqa iyo runta taas badalkeeda wayba sugayaan wixii xaq ama run ah. Adeegsiga caqliga kaliya waxaa ku duma ama ku baaba’ baadilka, beenta iyo khuraafaadka. Sidaas daraadeed ma jirto sabab looga cabsado wax iswaydiinta, shakiga, adeegsiga caqliga iyo akhriska xorta ah.
Raadinta runta iyo ogaanshaha xaqiiqadu waxay u baahan yihiin caqli, sidaas daraadeed naska diinta ah ee laguu sheegayo waa inuu caqliga daba fariistaa, wax garaadku aqbali karana ay noqdaan. Haddaan caqliga adeegsan lahayn wadaad xumayaal maan-xirani waxay doonaan noolama yimaadeen garaadkeenana kuma ay cayaareen ee caqligeenna ayay ixtiraami lahaayeen.
Guntii iyo gabagabadii waxaan ku leeyahay, caqligu waa halbeegga ugu wayn ee wax lagu miisaamo, mana jirto wax caqliga ka wayn oo wax lagu ogaado. Akhristoow kaasho maankaaga wixii uu yeelo ama sugo ayaa lama taabtaan ah. Wax walba sababee, su’aal gali, waxna iska waydii. Lahoow karti aad fahankaaga kuu gaarka ah ku isticmaashid. War hooy caqliga hala adeegsado. Caqligu waa wehesha nolosha.
“Iswaydiintu waa ogaalka barkiis”. Nebi Maxamad.
Thanks for encouraging critical thinking. i really love your content and the style you write. please keep going and expose these godamn shiikhs who discourage ‘critical thinking’ and using brain
Waan kaaga mahadcelinaynaa walaal, hadalkaaga dhiirri-gelinta ah. Halgankan maanfurkuna ma joogsan doono.
Reer galbeedka oo maanta loo arko dadka ugu horreeya aadamiga soomaalida magaalada iyo kuwa miyiga waxaa u dhaqan dhow kuwa miyiga ee bal aynu soo qaadanno dhowr waxyaalood oo ay iska shabbahaan reer miyigeenna iyo reer galbeed.
Waxyaalaha yaabka leh oo ay soomaalidu dadyowga kale kaga duwan tahay waxaa ka mid ah aragtida ay soomaalidu waallida ka haystaan iyo sida ay dadka waalan u la dhaqmaan, waxaana la isweydiin karaa bulsho qarniyo badan soo jirtey in ay sidaas waallida u la dhaqmaan.
W/Q: Abdulahi Kofiyadhere 25th April 2020